Pond's White Beauty Tone Up Milk Mask 25g – SUNNY eSTORE
Pond's White Beauty Tone Up Milk Mask...
Pond's White Beauty Tone Up Milk Mask 25g
Mask ကို အိတ်ထဲမှ ဖြန့်ထုတ်၍ သန့်စင်သောမျက်နှာပေါ်တွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကပ်ပါ။ ၁၅မိနစ်ပြည့်ပါက Mask ကိုခွာပြီးနောက် ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ အသားအရေပိုမိုကြည်လင်တောက်ပလာစေရန် တစ်ပတ်လျှင် ၃ ကြိမ်အသုံးပြုပါ။
နို့ရည်နှင့် Plankton အပြင် ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးသော အာနိသင် ၁၀ မျိုး ပါဝင်သည့် Pond’s White Beauty Instabright Tone Up Milk Mask Plankton က ထိရောက်စွာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အသားအရေကို တင်းတင်းပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ ဝင်းပစေပါတယ်။
Skin Radiance & Hydrating
Milk essence + Arbutin
- for skin smoothing and softening
- Skin brightening*
- Skin glowing
Plankton from deep sea water
- instant moisturizing
- Skin softening and luminous
- Skin smoothing and healthier
Apply clay foam directly onto dry skin. Gently massage in circular motion. Dampen face with water and massage to createacreamy lather. Rinse off.
Ingredients: WATER, GLYCERIN, MYRISTIC ACID, STEARIC ACID, KAOLIN, POTASSIUM HYDROXIDE, PALMITIC ACID, BENTONITE, LAURIC ACID, GLYCOL STEARATE, PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, TITANIUM DIOXIDE, FRAGRANCE, SODIUM CHLORIDE, CHARCOAL POWDER, DISODIUM EDTA, SODIUM BENZOATE, MOROCCAN LAVA CLAY, NIACINAMIDE, TOCOPHERYL ACETATE, MORINGA PTERYGOSPERMA SEED EXTRACT, PHENOX
​အေးမြ​ခြောက်​သွေ့ပြီး ​နေ​ရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်မထိ​သော ​နေရာတွင်ထားပါ
အသုံးပြုစဥ် အသားအ​ရေ နီမြန်းခြင်း ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်​ပေါ်ပါက ဆက်လက်အသုံးမပြုဘဲ အ​ရေပြားနှင့် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ
Packaging includes Pond's White Beauty Tone Up Milk Mask 25g